Saraakiil Boliis Ah Oo Ka Socda Dalka Uganda Oo La Keenayo Soomaaliya - Awdinle Online
Saraakiil Boliis Ah Oo Ka Socda Dalka Uganda Oo La Keenayo Soomaaliya
November 2, 2019 (AO) – Waxaa socda qorsheyaal lagu geynayo saraakiil boliis ah Soomaaliya si ay uga caawiyaan dhismaha awoodda boliiska Soomaaliyeed. Mr Grace Turyagumanawe, agaasimaha boliiska gaar ahaan kuwa taageera nabadda oo booqasho ku jooga Muqdisho si uu u qiimeeyo hawlaha boliisku ka hayo Soomaaliya iyo badqabka 160 saraakiil boliis ah oo Soomaaliya jooga ayaa sheegay inay socdaan qorsheyaal lagu geynayo saraakiil boliis ah geeska Africa.
Warkaan oo laga soosaaray hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM shalay ayaa laga soo xigtay Mr Grace Turyagumanawe in Uganda ay qorsheyneysay iney u hesho qalab qorshaha boliiska lagu geynayo Soomaaliya.
“Waxaa socda diyaargarow lagu xaqiijinayo inaan u daad-gureynno qeybtii labaad oo saraakiil boliis ah Soomaaliya sidii lagu heshiiyey dhawaan. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan helno agabka loo baahan yahay,” ayuu yiri Mr Grace Turyagumanawe.
Askartan boliiska ah ee ka socota dalka Uganda ee la geynayo dhawaan Soomaaliya ayaa ka dhigeysa tirada boliiska AMISOM ee Soomaaliya jooga gaar ahaan saraakiisha boliiska ee Uganda 300 oo askari.
Kordhinta saraakiishan boliiska ah ee hoos imaaneysa boliiska AMISOM ayaa lagu xaqiijinayaa in boliiska Soomaaliyeed uu helo awood ku filan oo uu kula wareego awoodda maareynta sharciga iyo kala-dambeynta dalka marka AMISOM baxda sannadka 2021 ayaa lagu yiri war kasoo baxay AMISOM.
Previous articleQadar Iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay Iskaashiga Isgaarsiinta & Tiknolojiyadda:- (Sawiro)
Next articleDhageyso :-Muqdisho oo lagu xusay maalinta caalamiga ah ee badqabka saxafiga:- (Sawiro)